Hadalka Malcolm X - AFRIKHEPRI
Hadalka Malcolm X
Cilladaha Cagaaran - Documentary (2019)
sabtiga, Julaay 11, 2020
Welcome HOGAANADA MADAXA CULUS
Lmarkaad ummad rabto, waxaa la yidhaa wadaninimo. Markay caddaanka Mareykanku arkeen inay ku hawlan yihiin kacdoon ka dhan ah Ingriiska, maxay taasi u dhacday? Ninka cadaanka ah ee dalkan wuxuu doonayey inuu dalkani dhiso qaran kale oo cad. Waa wadaninimo cad. Kacaankii Mareykanka wuxuu ahaa wadaninimo cad. Kacaankii Ruushka sidoo kale, laakiin haa, waxay ahayd wadaninimo cad. Miyaadan oggolayn? Maxaad ugu malaynaysaa inay Krushchev iyo Mao ku heshiin waayaan? Sababta oo ah wadaninimada cad. Dhammaan kacdoonnada hadda ka socda Aasiya iyo Afrika, maxay ku saleysan yihiin? Kacaanku waa wadani madow. Wuxuu doonayaa qaran. Waxaan akhriyey qoraal qurux badan oo uu qoray Wadaad Cleage, kaas oo uu ku macneeyay hadii aanu la jaan qaadi karin qofkasta oo magaaladan ku sugan, sababta oo ah qof walba wuxuu ka baqayaa in lagu aqoonsado wadaninimo madoow. Hadaad ka baqeyso wadaninimada madow, waxaad ka baqaysaa kacaanka. Hadana hadaad jeceshahay kacaanka, waxaad jeceshahay wadaninimo madow.
Si taas loo fahmo, waa inaad ka fekertaa waxa walaalkeen yar yar, halkan joogo, ayaa sheegay in farqiga u dhexeeyay wakhtigii addoonsiga ee u dhexeeyay shaqaaqooyinka gudaha iyo shaqaalahaba. Cibaadada guriga ayaa ah kuwa ku noolaa guriga macalinka; way qurxoonaayeen, wayna cuneen oo dhergeen, maxaa yeelay, waxay cuneen sidii macangaankii oo kale. Waxay ku noolaayeen dhulka hoostiisa ama qoryaha, laakiinse waxay degeen meel ka soo hor jeedda geedihii Asheeraah, oo waxay jeclaadeen inuu sayidkoodu ka weynaado sayidkii walaalkiis. Oo naftoodiina waxay ku dhiibtay oo ku deddejiyeen gurigii sayidkooda, Haddii sayidkuna yidhaahdo, "Waxaan leenahay guri wanaagsan," ayuu yidhi sarkaalkii guriga ka shaqeeyay, "Haa, waxaan haynaa guri fiican. Kolkaasaa sayidkuna wuxuu yidhi, Annagu waannu nahay. Tani waa waxa qarsoodiga ah ee guriga lagu aqoonsado.
Haddii ninkii guriga la leh tamar badan gubanaya, dab negro gudaha dagaal badan waxaa sayidkiisii ​​isaga qudhiisa ku riday. Haddii sayidku xanuunsado, nacaybka guriga wuxuu yiraahdaa: "Waa maxay arinta, maamulaha, waan jiranahay? Isagu wuxuu isku magacaabay sayidkiisa, in ka badan inta sayidkiisa la aqoonsan yahay isaga qudhiisa. Oo haddii ay tahay in aad ka heli addoonkii negro leh, "inaga baxsadaane, Save noo gurigan ka tago," addoonkii negro kor u eegay oo ku yidhi, "Waad waalan, nin, maxay ka dhigan tahay, Gurigaan ka tagaa? Miyaad ogtahay guri ka wanaagsan tan kan? Xaggee ayaan ka wanaagsanahay dharka iga badan halkan? Halkee baa laga sii fiicnaan lahaa halkan? Tani waa waxa xun ee gudaha. Waqtigaas, waxaa loo yaqaan "hurdo". Oo sidaas daraaddeed waxaan weli soo wac maanta sababtoo ah waxaa weli.
Nacasku wuxuu jecel yahay sayidkiisa. Wuxuu doonayaa inuu la noolaado. Wuxuu bixinayaa saddex jeer qiimaha guriga uu ku nool yahay, kaliya inuu la noolaado sayidkiisa, ka dibna ku faanto inuu noqdo "geeska kaliya ee madow". "Waxaan ahay kan kaliya ee ka tirsan xisbigayga. "Waxaan ahay kan keliya ee dugsigaan ..." Waxaad tahay kaligii taliye guri. Oo haddii nin yimaado oo uu idinku yidhaahdo, Gurigaan ka baxdo, adiguna waxaad ka jawaabi doontaa runta canabka ah ee beerta, waayo, bal maxaad ula jeeddaan gurigan? Ka soo jeeda Maraykanka, cadaankani cadaa? Mise waxaad ka heli doontaa shaqo ka fiican kan aad halkan ku haysato? Haa, taasi waa waxaad leedahay. Laakiin madax ayaad ka tagtay Afrika.
On beerto, waxaa sidoo kale jiray shaqaale xun. Negroes adag oo shaqeynaya ayaa ahaa mawduucyada. Madaweyntu had iyo jeer way ka badan yihiin beeraha marka loo eego guriga. Ninka madow ee shaqeeya wuxuu keenay nolosha jahannamada. Wuxuu wax cunay haray. Cuntada guriga ayaa cunay hilibka ugu fiican ee hilibka doofaarka. The negro ee beeraha lahaa waxba ma ahan waxa ka hadhay caloosha hilibka doofaarka, waxa hadda lagu magacaabaa offal. Waqtigaas, waxay u yeedheen magaciisa dhabta ah. Taasi waa waxa aad ahayd cuncun cunid. Oo qaar idinka mid ahu walaashoodana wuu cunaa.
Oo beertii midhaha badnaydna habeenkiina wuu oofiyey, wuxuu ku noolaa aqal shisheeye ah; wuxuu soo xidhay dhar duug ah oo aan cidna dooneynin. Wuxuu neceb yahay sayidkiisa. Haa, wuu neceb yahay. Wuxuu ahaa mid caqli badan. Jacaylka gudaha wuxuu jecel yahay sayidkiisa, laakiin waa been-abuurka beeraha, oo xusuusnow in uu ahaa aqlabiyadda, necbaydii. Markii guriga la gubay, ma uusan isku dayin in uu dabka demiyo, cibaadada beeruhu waxay ku tukadeen duufaan dabaysha. Markii sayidkuna xanuunsaday, dantii beertu way ka baryeen inuu dhinto. Haddii nin u yimid inuu ku ogaado beeraha canabka ah oo uu ku odhanayo, Gurigan ka tegi mayno, yaan annaguna badbaadinno, oo aannan u jawaabin. Laakiin "wax walba oo aan ahayn gurigan. Hadda waxaa jira goobo aan ka fogeyn Mareykanka. Anigu mid baan ahay. Cabbiradu waxay ka kooban yahiin wax laga yiraahdo beeraha. Marka ay arkayaan guriga gubtay cadaan, ma maqli kartid yar-yar ee madow waxay yiraahdaan, "Dawladeenu way ku jirtaa dhibaato." Bal qiyaas sawir madow, "Dowladdayada! Waxaan xitaa maqlay hal hadal ku saabsan "astronauts our," "Ciidankayaga dagaal! Halkan waa nin madow oo maskaxdiisa ka lumay.
Sida sayidku, wakhtigaas, wuxuu adeegsan jiray Tom, khaniisnimada gudaha, si uu u ilaaliyo jaahwareerka beeraha ee uu xukumo, waayeelka waayeelka ah hadda waa Negro aan waxba ahayn Amin. Tom oo qarnigii labaatanaad, si aad noogu sii socotid oo aad naga ilaaliso gacmahaaga, adiga iyo aniga, inaan naga ilaalino nabada aan rabshad lahayn. Waa Tom oo kaa dhigaya mid aan rabshad lahayn. Waxay u egtahay markaad aadeyso dhakhtarka ilkaha oo uu diyaar u yahay inuu kaa kiciyo iliga. Waxaad adkaan doontaa marka uu bilaabayo toogashada. Sidaa daraadeed waa inaad duuf ku shubtaa alaab la yiraahdo novocaine, si aad u rumaysato in aysan waxba kuu qaban. Adiga oo fadhiisanaya iyo sababtoo ah dhammaan novocaine-ka ee daankaaga, waxaad ku xanuunsanaysaa nabadda. Dhiiggu way ka daalan yihiin daankaaga, mana ogaan kartid waxa socda. Sababtoo ah waxaa laguu baray si nabadgelyo leh.
Maxay kula tahayx
Malcolm X awoodda madow
4 cusub oo ka yimid 11,90 €
7 waxaa laga isticmaalay € 11,00
Iibso 11,90 €
ilaa Luulyo 11, 2020 12:29
Part Number 9782707154408
Taariikhda lagu sii daynayo 2008-03-13T00:00:01Z
Publication Taariikhda 2008-03-13T00:00:01Z
category HOGAANADA MADAXA CULUS
U yeeridii Thomas Sankara ee go'aan qaadashada
Khudbadda uu Hugo Chavez ka jeediyay Shirweynihii 61-aad ee Golaha Guud ee Qaramada Midoobay
Sida loo horumariyo is-jacaylka - Louise Hay (Audio)
Krishnamurti iyo dhibaatada waxbarasho (Audio)
Waa maxay Feng Shui?
Si aad uga faallooto, dhagsii astaanta bulshada ee aad dooratay
faallo cusub oo la socoshojawaabaha cusub ee faallooyinkayga
3 maalmood kahor